Puntland oo ka hor istaagtay in uu galo Taliyaha Ciidanka Lugta degaanka Towfiiq - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaPuntland oo ka hor istaagtay in uu galo Taliyaha Ciidanka Lugta degaanka Towfiiq
December 13, 2019 marqaan Wararka Maanta Comments Off on Puntland oo ka hor istaagtay in uu galo Taliyaha Ciidanka Lugta degaanka Towfiiq
Taliyaha Ciidanka Dhulka General Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo taliska 21-aad Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan gaaray degaano ka mid ah Bariga gobolka Mudug ayaa ku guuleystay in la joojiyo dagaal geystay Khasaare badan oo ka dhacay degaanada Afbarwaaqo iyo Towfiiq.
Taliyaha Ciidanka Lugta iyo Saraakiisha la socotay ayaa kulamo kala duwan kula qaatay Odayaasha dhaqanka Mid ka mid ah beellaha dagaallamay Afbarwaaqo,waxaana sidoo kale ay ku guuleystay in Maleeshiyaadii hubeysanaa ee halkaasi ku sugnaa laga dhaadhiciyo in ay ku qancaan Waanwaanta ay waddaan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Taliyaha iyo Ciidankii uu watay ayaa shalay Gelinkii dambe u dhaqaaqay Degaanka Towfiiq oo ay ku sugan yihiin Mid ka mid ah beellaha dagaallamay si dhankooda ay kulamo ula qaataan ayna ugu qanciyaan in ay nabad waddaan.
Maamulka Puntland ayaa u diiday in uu galo degaanka Towfiiq Taliyaha Ciidanka Lugta Soomaaliya, waxaana gaaray Towfiiq Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland iyo Wasiir ka tirsan Puntland oo dadka degaanka u sheegay in aysan soo gali karin degaanka Towfiiq.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa diiday tilaabadda Puntland, waxaana ay sheegeen in dagaalka ay dad badan ku dhinteen,islamarkaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka doonayaan in ay degaanka nabad ka dhigto,maadaama Puntland iyo Galmudug ay horay ugu fashilmeen.
Ugu dambeyntii taliyaha Ciidanka Lugta ayaa galay degaanka Towfiiq, waxaana uu halkaasi kula yeelan doonaa kulamo kala duwan Odayaasha dhaqanka.